Jowhar.com : Somali Leader News - News: Ciidamada Jabuuti iyo kuwa Itoobiya oo u soo ruuqaansaday Buulo Burde iyo Isgaarsiinta Beledweyn oo go'an
April 24 2014 14:33:06
Sida ay sheegayaan wararka ciidamadan oo ku hubeysan gaadiidka dabaabaadka ayaa xalay ka soo baxay magaalada Beledweyn, iyadoo dadka deegaanka ay hadal hayaan dhaq dhaqaaqyadan cusub.
Isgaarsiinta magaalada Beledweyn ayaa hawada laga saaray, intii ay jireen dhaq dhaqaaqyada ciidan ee ay wadeen ciidamada huwanta, waxaana arrintan ay noqoneysa mid aad uga duwan dhaq dhaqaaqyadii hore.
Warar laga helayo degmada Buulo Burde ayaa sheegaya in dadka deegaanka ay bilaabeen inay isaga barakacaan, kadib markii ay ka war heleen dhaq dhaqaaqyada ciidan ay wadaa Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo habeenimadii xalay ka soo dhaqaaqay Beledweyn.
Magaalada Buulo Burde ayaa u jirta Beledweyn ilaa 115-KM, iyadoo wadada u dhaxeysa ay tahay wado aan sahlaneyn oo buuro ay ku yaalaan, lama oga ilaa iyo hada halka ay ku sugan yihiin Ciidamada huwanta ee ka ruuqaansaday Beledweyn.
Al-Shabaab ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa dagaalo cusub kaga furmeen qaar ka mid ah gobolada dalka oo dhowr degmo gacantooda ka baxday, iyadoo duulaankan ay hogaamineyso Ciidamada Itoobiya oo ka mid noqotay howl galka AMISOM.
0 Comments · 3128 Reads
Jowhar.com746,246 unique visits